आफुलाई चुस्त-दुरुस्त राख्न के कृतिम भिटामिन नै आवश्यक छ त ?कृतिम भिटामिन मानिसलाई कति आवश्यक छ ? – Annapurna Post News
आफुलाई चुस्त-दुरुस्त राख्न के कृतिम भिटामिन नै आवश्यक छ त ?कृतिम भिटामिन मानिसलाई कति आवश्यक छ ?
June 21, 2022 sujaLeaveaComment on आफुलाई चुस्त-दुरुस्त राख्न के कृतिम भिटामिन नै आवश्यक छ त ?कृतिम भिटामिन मानिसलाई कति आवश्यक छ ?
मानिसलाई कृतिम भिटामिन कति छ आवश्यक ? आज हाम्रो सामान्य स्रोत र साधन हुँदा-हुँदै पनि हामीलाई किन भिटामिन किन्न बाध्य बनाइएको छ । सधैँ स्वस्थ्य रहनु हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । आजकालको व्यस्त जीवनमा निरोगी तथा स्वस्थ्य रहिरहन हामीमध्ये धेरैजना कृतिम भिटामिनको सहारा लिईराखेका छौं । तर के यी भिटामिनहरु साँच्चिकै आवश्यक छन् त ?
तर, तपाईं राम्रो अवस्थामा आफुलाई पाउनुहुन्छ भने यस्ता अतिरिक्तको खासै आवश्यकता पर्दैन । बृद्ध हुँदै गएका मानिसहरु, शरीरमा भिटामिनको कमी भएकाहरु तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरु भएकाहरुलाई यो भिटामिन आवश्यक भएको हुन सक्छ । केही मानिसहरुलाई भिटामिनको अत्यधिक कमि हुन्छ जसले गर्दा उनीहरुको ज्यानै जाने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तो सार्है खतरापूर्ण अवस्थामा अतिरिक्त रुपमा भिटामिनहरु सेवन गर्नैपर्ने हुनसक्छ ।